ပတ္တမြားမြေမှ အလှတရားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ပတ္တမြားမြေမှ အလှတရားများ
Posted by weiwei on Oct 10, 2014 in Photography, Travel | 20 comments
ဓါတ်ပုံတွေများလို့ ၂ ပိုင်း ခွဲလိုက်တာပါ။
ပတ္တမြားစေတီတောင်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ မိုးကုတ်မြို့က အလွန်လှပါတယ်။
ပုံ (၁) မိုးကုတ်အလှ
ပုံ (၂) မိုးကုတ်အလှ
ပုံ (၃) ချမ်းသာကြီးဘုရား
ပုံ (၄) မိုးကုတ်မြင်ကွင်း
ပုံ (၅) အမြင်ဒေါင့်မျိုးစုံကနေ ကြည့်မယ်
ပုံ (၆) ကြည့်လို့ မ၀နိုင်
နေ့လည်စာ စားပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဖောင်တော်ဦးဘုရားဆီကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ဖောင်တော်ဦးဆိုတော့ ကန်အစပ်မှာရှိမယ်လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း မြို့ထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ပုံတွေကြည့်လိုက်ကြပါအုန်း။
ပုံ (၇) တန်ဆောင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာ ကိုးကွယ်ထားသော ဖောင်တော်ဦးဘုရား
ပုံ (၈) ဘုရားအနောက်ဘက်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ရွှေပလ္လင်
ပုံ (၉) ငွေပလ္လင်
ပုံ (၁၀) ဓါတ်ပုံကို ဓါတ်ပုံ ပြန်ရိုက်ခဲ့တာ
ပုံ (၁၁) လှပသော လက်ရာ
ပုံ (၁၂) ခမ်းနားထည်ဝါသော
ပုံ (၁၃) စောင်းတန်းပုံစံက အမြင်ဆန်းနေတယ်
ပုံ (၁၄) လူသားအစစ်နဲ့ ခွဲမရအောင်တူတဲ့ ရုပ်ထု
ဖောင်တော်ဦးဘုရားကနေ မြို့လည်ကို လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ မိုးကုတ်ဈေးပါ တြိဂံပုံ သဏ္ဍာန် တည်ထားပါတယ်။
ပုံ (၁၅) မိုးကုတ်မြို့တွင်း
ပုံ (၁၆) ဈေးကို မြင်ရမယ်
မိုးကုတ်က အပြန်မှာတော့ လာလမ်းဖြစ်တဲ့ ပြင်ဦးလွင် မိုးကုတ်လမ်းကို ပြန်မသွားပဲနဲ့ သပိတ်ကျင်း မန္တလေးလမ်းကနေ ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မိုးကုတ် မန္တလေး ၁၂၆ မိုင်ရှိပါတယ်။ သပိတ်ကျင်းအထိ မိုင် (၄၀) လောက် တောင်တက်လမ်း အကွေ့လမ်းတွေရှိပေမယ့် သပိတ်ကျင်းကျော်သွားရင် မြေပြန့်ဖြစ်သွားပါပြီ။ အသွားအလာပိုများပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်လမ်းကတော့ လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့သိခဲ့ရတယ်။ သူပုန်တွေရှိပြီး တစ်ခါတစ်လေ ဓါးမြထွက်တိုက်တတ်တယ်တဲ့။ တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့လဲ သိခဲ့ရတယ်။ အသွားတုန်းက ဘာမှမသိလို့ မကြောက်ပဲ သွားခဲ့ပေမယ့် အန္တရယ်ရှိတယ်လို့ သိလိုက်ရပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ မပြန်ရဲတော့ပဲနဲ့ အသွားအလာများတဲ့ သပိတ်ကျင်းလမ်းကို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ (၄) နာရီလောက်ပဲ ကြာမယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းသွားကြည့်တော့ ၆ နာရီတောင်ကြာခဲ့ပါတယ်။ တောင်ပေါ်လမ်းက ပြင်ဦးလွင်လမ်းလောက် မကောင်းတာရော၊ ကားအသွားအလာများကို အရှောင်အတိမ်းများတာရောကြောင့်ပါ။ မိုးကုတ်အနောက်ပြင်ဘက်ကနေ သွားခဲ့ရတယ်။ မြို့အထွက်မှာ ရွှေလိပ်ပြာဟိုတယ်နဲ့ လှပတဲ့ ရှုခင်းတွေ မြင်ခဲ့ရတယ်။
ပုံ (၁၇) ရွှေလိပ်ပြာဟိုတယ်
ပုံ (၁၈) view point တစ်နေရာ
ပုံ (၁၉) ဟိုတယ်နေရာယူထားတာလေးကောင်းတယ်
မိုးကုတ်မြို့ကို နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် …..
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးး တရားးအားးထုတ်တဲ့ ကျောက်တွင်းးတွေဘက်
အို, ဝေ အတွက်ဆို ဓာတ်ပုံ အများးကြီးး ရမှာ…
အချိန်များးရရင် နောက်တစ်ခေါက် အတူသွားးချင်ရဲ့..
အောက်ဆုံးးကမြင်ကွင်းးကျယ် ပုံတွေ ကြိုက်လိုက်တာ,….
ဒေါ်နန်းကြည်တောင်မှာ ကားမရပ်ခဲ့လို့ ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
အားလုံးပေါင်း ၃ နာရီပဲ နေခဲ့လို့ သေသေချာချာ စုံစုံလင်လင် မလည်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အစီအစဉ်မရှိပဲသွားလိုက်လို့ ညရှုခင်းလဲ မကြည့်ခဲ့ဘူး။
နောက်တစ်ခေါက် အဆင်ပြေအုန်းမယ်ဆိုရင် သွားချင်ပါသေးတယ်။
ကျနော် တစ်ညအိပ်ရောက်ပေမယ့် မြူတွေမိူင်းနေတော့ (ဒေသ အခေါ် ကျတ် တိုင် တယ် )ပတ္တမြားတောင်ပေါ်မတက်ခဲ့ရ
ကျပ်ပြင်ရောက်ပေမယ့် ဒေါ်နန်းကြည် တောင် ကျောက်ပြသာဒ် ကို လည်း မရောက်ခဲ့ရ
ကျပ် တိုက်တယ် လို့ ပြင် ဖတ်ပေးကြပါနော်
ကျပ်ပြင်ကနေဆင်းတော့ ရွှေလိပ်ပြာ ဟိုတယ် ကို တောင် အဆင်းလမ်း ကနေ မြင်ရတာ အရမ်းလှပါတယ်။
စကားစပ်လို့ ပြောရရင် စကားပြောကောင်းတဲ့ မိုးကုတ်သားတယောက်ကိုတော့ တွေ့ဖူးတယ်
မိုးးကုတ်သားးတွေ ချော တာတော့ ငေးးးနေရ….!!!
မိုးကုတ်သားတွေက ဖော်ရွေမှုရှိတာတော့ သေချာတယ် … လမ်းမေးလိုက်ရင် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ သေသေချာချာရှင်းပြတယ် .. ထမင်းဆိုင်က အမျိုးသမီးတွေက သူတို့အိမ်ကို ဧည့်သည်လာလို့ ဧည့်ခံသလိုမျိုး ဧည့်ဝတ်ကျေတယ် .. ပြုံးရွှင်နေကြတာပဲ ..
ရုပ်လည်းချောတယ် အပြောလည်းကောင်းတယ် But the big but is သူက အလုပ်မကြိုးစားဖူး လေ
ဒီလိုနဲ့ပဲ ……….. ဟီး
ကြည့်ရတာတော့ .. မိုးကုတ်မှာ ကျောက်အောင်ပြီး အရမ်းချမ်းသာတဲ့သူဌေးတွေကိုအားကျပြီး အိမ်မက်မက်နေတာဖြစ်မယ် … လမ်းလျှောက်ရင် မြေကြီးကို ကြည့်ပြီးရော မလျှောက်ဘူးလား … ကြားဖူးတာတစ်ခုက မိုးကုတ်သားတွေက မြေကြီးကို အမြဲကြည့်တယ်တဲ့.. မတော်တဆ ကျောက်ကောင်းကောင်းကို ကောက်ရမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့
တစ်နှစ်တစ်ခေါက်လောက်တော့ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေကို သွားလည်ချင်ပေမယ့်…စိတ်ကူးပဲရှိနေခဲ့တယ်…
ခရီးသွားရင်… စိတ်တူကိုယ်တူသူငယ်ချင်း/ဆွေမျိုးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်းသွားချင်တယ်.. လူများလေ.. စိတ်ရှုပ်ရလေမို့… ကိုယ့်မှာ အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိပေမယ့်
အစအဆုံးကိုယ်တာဝန်ယူရမယ့်လူမျိုးတွေဖြစ်နေတော့လည်း… :(( မျောက်ပိုစ့်ကတည်းက စဖတ်နေတာ… မဝေကို မနာလိုတော့ :))
အဖေနဲ့အမေနဲ့ အတူတူသွားရတာဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားရသလိုမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး … လူကြီးတွေအကြိုက်လိုက်လုပ်ရတော့ ခံစားချက်ခြင်းက ထပ်တူမကျနိုင်ဘူး … ဒါပေမယ့် ခရစ် ပြောသလိုပဲ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကပဲအကုန်ခံရမှာဆိုတော့ အကုန်ခံစရာမလိုတဲ့သူတွေနဲ့ပဲ သီးခံပြီး သွားနေရပါတယ်။
ဟုတ်ပါ့ ဝေေ၀ရေ… ပထမက ပုံတွေကို စခရိုး ဆွဲကြည့်တော့… အော် ဘုန်းကြီးကိုလဲ ဓာတ်ပုံရိုက်လာတယ်ပေါ့… ဒါနဲ့ အောက်က စာ ဖတ်မှ ရုပ်ထုမှန်းသိတာ… ဟီး… တော်ချက်နော်…
ခရီးသွားရတဲ့အရသာကို မခံစားရတာ ကြာပြီ။
ဝေေ၀ရဲ့ပိုစ့်တွေနဲ့ပဲ ခရီးသွားနေရလို့ တော်သေးတာပေ့ါ။
ရွာထဲရောက်ကာစတုန်းက ဝေေ၀ရဲ့ ခရီးသွားပိုစ့်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုတောင် သတိရမိသေးတော့တယ်။
ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနေရတာ ကြာလေမွမ်းကြပ်လေပါပဲ ..
အလုပ်ကလဲ ကြာလေ စိတ်ဖိစီးမှုများလာလေပဲ ..
ရန်ကုန်မြို့အပြင်ကို ထွက်ကြည့်လိုက်ရင် စိတ်လွတ်လပ်တယ် .. မျက်စိအတွက်အားဖြစ်တယ် .. လေကောင်းလေသန့်ရတယ် ..
အဲဒါတွေကြောင့် ခဏခဏ ခရီးသွားဖြစ်နေတာပါ ..
မိုးကုတ်မှာ အစည်ကားဆုံး အချိန်ဆိုရင် တပေါင်းပွဲလို့ ထင်တယ်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင် ဖောင်တော်ဦး နဲ့ အနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ကျောက်ပြာသာဒ် နဲ့ ဒေါ်နန်းကြည့်တောင်ဗျ။ အဲဒီအချိန်တွေဆိုရင် မိုးကုတ် အရှေ့ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်းဆို ဆိုင်ကယ်တွေ ကားတွေ အသွားအလာမပြတ်ပဲဗျ။
မန်း နဲ့ မိုးကုတ် နီးနေတာကို ရောက်ဖြစ်သေးဘူးဗျ